Imidlalo yebhola ekhatywayo | Iiwebhusayithi zePC kunye ne-Android Android, i-Emulator. Online
Imidlalo yebhola. Umdlalo omnandi uyaqhubeka ukutsala umdla wabanomdla, ngakumbi nangakumbi imidlalo ebonakalayo egameni lakhe. Uyakwazi ukufikelela kwimidlalo emininzi oyithandayo.
Lo mdlalo njalo enomtsalane phakathi kwabaselula nabadala ifumana ixabiso elikhulu kwindawo ebonakalayo. Apho iphupha lakho lokuba ngumdlali obalaseleyo lizaliseka. Kodwa uya kufezekisa ukhetho ukuba ungomnye wabo baphupha ngokwenza iqela lakho kunye nokucwangcisa ukudlala.
Into ebalulekileyo kukuba uyonwabele isithuba okanye isixhobo okhetha imvakalelo yomdlalo omnandi.
Ngaba ungathanda ukwazi eyona midlalo yebhola ekhatywayo yasimahla? Yiza uzonwabele yimincili eyona midlalo ilungileyo ehlabathini! Apha unokufumana olona khetho lufanelekileyo onokuludlala kuyo nayiphi na ikhompyuter okanye isixhobo esiphathwayo.
Ngaba unesibindi sokumazi eyona midlalo yebhola ekhatywayo?
Eyona nto ibalulekileyo kwimidlalo yebhola ekhatywayo
Ukuba ufuna ukwenza amava ebhola ekhatywayo ngakumbi nangakumbi, unokhetho lokwenza i-ascargas. Nangona ukubakho kwemidlalo yasimahla kungekho kangako, ukuba unganakho ukufikelela kwezinye ezithile eziza kukwenza ungcangcazele yimvakalelo.
Ezinye izinto ezingalunganga onokuzifumana kukuba uninzi luthengiso oluhlanganisiweyo ngelixa ukubakho kwazo kungekho mda. Oku kuthetha ukuba unokuzikhuphela kwaye dlala simahla.
Nangona kunjalo, ngaxa lithile kuya kufuneka wenze iintlawulo ukuze ube nakho ukuqhubela phambili kwaye ukonwabele ezinye izibonelelo. Dlala ibhola ekhatywayo kwaye wonwabe nabahlobo bakho, ungaphoswa lithuba lokuba nexesha elihle.
Phakathi kwezibonelelo onokuziphumeza kukuba uya kuba nakho ukudlala imidlalo yebhola ekhatywayo kwi-intanethi nabanye abadlali. Unokubona kwakhona imatshisi yakho, cwangcisa imidlalo yakhoNgale ndlela, uphonononga kwaye uqinise icala lakho lokuphatha.
Fumanisa amanqaku abuthathaka eqela lakho eliphikisanayo kwaye uya kuvavanya ngcono iindlela zakho ngalo mzuzu ujongene nazo.
IFIFA ngamawaka amabini aneshumi elinesibhozo-2019
I-FIFA ngokucacileyo yeyona ilungileyo kwaye ayifuni khadi yoshishino. Ngalo lonke ixesha ulungiso lungaphezulu kokulindelweyo. Oku kuthathwa njengenye ye ngcono Imidlalo yesoka, yeyona ibaluleke kakhulu kwaye idlalwe kumaxesha akutshanje.
Enkosi kumbhali wayo wezoBugcisa be-Elektroniki- i-Ea Sport, amava e-3D ekhatywayo oza kuphila aya kuba yinyani. Uya kuyifumana simahla ukuba I-PC, i-PS4, i-Xbox One, Tshintshela. Yiza uzonwabele ngamava, iFIFA iza kukwenza uhlale ubambekile.
Inendawo enkulu yokuyihambisa, ekunika ulawulo olupheleleyo lwayo. Lonke udumo lwale simulator lubangelwa Umgangatho kunye namava okwenyani Ibonelela ngantoni. Umgangatho wemifanekiso oyibonisayo uphuculwe kwinguqulelo nganye uyenza ibe nomtsalane kakhulu.
Inezikhundla ezisemthethweni zeqela ngalinye lebhola ekhatywayo. Ngaphandle kwe- Iirabhu zaseburhulumenteni okubaluleke kakhulu, kudidi lwesizwe nolwamanye amazwe. Imizekelo yabo yiChampion League, iSpanish League, i-English Premier League, i-UEFA Euro Cup.
Izinto ezintsha ezinikwa ngumhla wethu zibandakanya ukuphuculwa kwe- intshukumo yokwenyani yabadlali. Ubuchule bomdlali ngamnye obutyhiliweyo banamava xa kufikwa ekukhulisweni komzimba kunye nokuzikhusela.
Inkangeleko yomzimba yabadlali abaninzi ihlaziyiwe, ukwenza amava akho anyaniseke ngakumbi. Ukongeza koku ulawula izakhono zokulawula ibhola ngokuchasene neebhola ezahluliweyo. Uyakwazi ukubumba ifayile ye Amaqhinga okukhubekisa nokukhusela kwiqela lakho
Inkqubo esebenzayo yokuchukumisa iphuculwe ukuyinika usetyenziso olukhulu. Uya kufumana izakhono abadlali kakhulu ezifana UMessi, uCristiano Ronaldo, uNeymar phakathi kwabanye. Ke awunakuphulukana namava okudlala ibhola ekhatywayo kunye nale simulator yomdlalo webhola ekhatywayo.
I-Pro Evolution Soccer amawaka amabini aneshumi elinesithoba (i-PES amawaka amabini aneshumi elinesithoba) ngowokuqala Eyona midlalo ilungileyo yokulinganisa umdlalo simulators ibhola ekhatywayo. Le simulator yenziwe nguKonami isimahla kwiMicrosoft Windows, Android, PS ezine, PS ezintathu, Xbox ezingamakhulu amathathu anamashumi amathandathu, iOS, GNU / Linux.
Ukuba ungomnye wabo bathanda ibhola kwinqanaba elikhulu, eli lithuba elihle lokuba uvavanye izakhono zakho. Ngale nto uya kuba nakho ukungcamla imvakalelo yokudlala ibhola ekhatywayo kwi indawo yokwenene. Eli videogame, olona khuphiswano lusondeleyo lweFIFA, iqhubela phambili nangakumbi kuphuculo lokuzithelekisa nomchasi wayo.
Iminyaka embalwa iza Ukuvela kumgangatho enikelwe kubasebenzisi. Namhlanje uya kuba nakho ukubona ukuba abadlali banembonakalo yokwenyani. Ukongeza koku, bayilelwe ukubamba iimeko zabadlali bokwenyani, ezinje ngeentshukumo zabo (ukuhamba, ukujika, ukukhaba, ukudinwa kunye nabanye).
Ikwabandakanya iligi yokwenyani, isenza sibe nomtsalane ngakumbi. Imidlalo iyasebenza kwaye amabala emidlalo ayonwabela inyani. Uya kuba nakho ukongamela umdlalo ngendlela elula kakhulu kwaye ekhululekile.
I-PES emva kwexesha igcina ukugqwesa. Imizobo igcinwa ihlaziyiwe kwaye ukuntywiliselwa oza kuba nako kwihlabathi lebhola kukhethekile. Yiza wonwabe PES 2019 kwaye wenze amava akho ebhola ekhatywayo angenakuthelekiswa nanto.
Ibhola 3D: Ibhola ekhatywayo ye-Intanethi
Ibhola 3D yi platform kulungile, uyakufumana ithuba lokudlala ibhola ekhatywayo kwi3D.
Ilula ukuyisebenzisa kwaye unolawulo lwento nganye enokwenziwa. Iiyure ziya kudlula ukonwabela ukudlala okuhle. Ngaba simahla uku IWindows kunye neMac OS X.
Lo mdlalo wekhompyuter awufikeleli ekuthandeni kweFIFA nakwiPES. Ngale ndlela iyaqhubeka isoyikisa kwaye isetyenziswa ngamawaka kunye namawaka abasebenzisi. Ke musa ukuthintela ukuba kunokwenzeka ukonwabele iimvakalelo zebhola ekhatywayo.
Inkcazo yayo ye-3D ine-aesthetic elula kakhulu. Isimahla Windows XNUMX kwaye uya kuba nakho ukuyikhuphela simahla.
Ibhola ekhatywayo yeFIFA
Lo mdlalo webhola ekhatywayo simahla kuwo I-iOS kunye ne-Android. Kukulungele ukuxhoma nakweyiphi na indawo, ngelixa ulindile kwaye ufuna ukuba nexesha lokuphazamiseka.
Ayinawo umgangatho ofanayo kwikhompyuter. Ngale ndlela uyakonwaba Ukusombulula imidlalo kunye nezinye iinkcukacha zasimahla. Iyaziwa kakhulu ngabasebenzisi. Ke ungathandabuzi kule ndlela yokulayisha ibhola kwiselula yakho.
Iphupha lebhola ekhatywayo
Ngomboniso olula, utsala umdla wabasebenzisi abaninzi. Yintoni onokuyenza ukuba uyathanda umdlalo webhola ekhatywayo ungayikhuphela mahala.
Uyakwazi ukudlala imidlalo, uqwalasele uluhlu lwakho kwaye uphumelele amabhaso emali. Ngaba simahla uku Android kunye ne-iPhone.
Inqaku lokwenyani lokuziqhelanisa nalo xa uthanda ukudubula. Ngokusisiseko isekwe kwizohlwayo kwaye kufuneka ube nezakhono ezintle ngeminwe yakho. Uya kukwazi dlala kwi-intanethi kwaye uneemeko ezininzi zokwenza iinjongo zakho.
Unalo nethuba lokwenza njalo dlala kwiiligi ezininzi kunye nokubeka isitshipsi. Inkulu yeligi, ibhaso elikhulu oza kuba nalo. Njengoko uhamba phambili kumanqanaba, ubunzima buya kuba bukhulu.
Ukukhaba kokugqibela Kukunika ithuba lokudlala nabahlobo bakho kunye nokulwa izohlwayo. Inika imidlalo eyahlukileyo ehlala ixesha elifutshane. Oku kukuvumela ukuba uqokelele amanqaku kunye namabhaso anokukunceda woyise amanqanaba.
Phila amava kunye nemvakalelo ibhola eqongeni ekuhambisa kakhulu. Ukuba ityala lakho lihlawuliswe, unganqikazi ukubonisa oko.
Lo mdlalo we ibhola ekhatywayo kwi-intanethi kukhuphiswano kwaye kuyonwabisa kakhulu. Uphawu lwabadlali babo kukuba banembonakalo yekhathuni eneentloko ezinkulu kunomzimba wabo. Inomboniso we-3D onomfanekiso webhola ekhatywayo eyaziwayo ngelo xesha.
Uyakwazi ukuchitha iiyure ukonwaba. Gqibezela imiceli mngeni apho kufuneka uqhubekeke khona imijikelo eliqela engafakwanga. Eyona nto iphosakeleyo kukuba awuyi kukwazi ukudlala ngokubanzi nabahlobo bakho. Ngale ndlela, yabelana ngamava amnandi aza kukunika wona iNtloko yeSoka.
Iiwebhusayithi ezifanelekileyo zokudlala ibhola mahala
Kukho uninzi lwamaphepha apho ungadlala khona ibhola ekhatywayo simahla, kodwa ayithembeki nganye nganye. Kungoko ndicebisa ukuba wazi ngokuqinisekileyo iphepha elinokuthenjwa nelikhawulezayo apho uzakudlala khona ibhola ngaphandle kokuphazamiseka. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwezinto ezifanayo kuphantsi koxanduva lwakho olupheleleyo.
Ngoku ndibonisa kuwe amaphepha athile anokuvumela ukuba udlale ibhola kwaye ube nexesha elimnandi.
Le webhusayithi uza kuyifumana ezahlukeneyo kulowo nalowo ukuthanda izinto. Uyakwazi ukwenza imidlalo eya kuphawula imbali yakho njengomdlali webhola. Beka izihlangu zakho ezibonakalayo kwaye ukhabe inyawo lebhola njenge pro.
Isifuba sebenzisa umzobo womdlali wakho omthandayo kwaye wenze imidlalo evuselelayo. Okanye ukuba ufuna nje ukuthatha isohlwayo ungayenza.
Ubeka iqonga kunye nabadlali. Ukusuka kwizithuthi ezizenza abadlali kunye nokufumana amanqaku, ukuya yokufunda. Eli phepha liphuhlisiwe kwisigaba ngasinye.
Kuyo uya kufumana amanani owathandayo Iikopi ezidlala ibhola ekhatywayo, kumanani okwenyani abo bafumana amanqaku akho awathandayo.
Nokuba ukhetha uhlobo olunjani, ndiyakuqinisekisa ukuba uya kuba nexesha elihle ukudlala mahala umdlalo owuthandayo.
Iibhola zebhola ezinyawo zonke.com
Le webhusayithi iya kukuvumela ukuba udlale kwi-Intanethi ngokufanelekileyo kwaye ukhuphisane kakhulu, ngaphandle kwentlawulo. Uyakwazi ukudlala ngokuchasene nabadlali kunye namaqela avela kwihlabathi liphela. Yenza ubuhlobo kwaye uthathe inxaxheba kwiiligi kunye nobuntshatsheli ngamabhaso.
Ukudlala kufuneka ufake iphepha kwaye yenza ubhaliso ngedatha yakho yobuqu kwaye wenze umsebenzisi. Khetha ulwimi lwelizwe lakho, konke oku simahla. Kuya kufuneka uqinisekise umsebenzisi ngokungena kwi-imeyile yakho.
Iinyawo zebhola iyahambelana ne IWindows XP kunye neeWindows 7 / 8 / 10. Ungadlala nanini na ufuna, kufuneka ufake igama lomsebenzisi kwiphepha. Uya kukhululeka ngempumelelo.
Khokela umdlali wakho kwaye uwuthathe kumanqindi amancinci ukuba abe inkwenkwe yebhola ekhatywayo kudidi lwamanye amazwe. Uyakukwazi ukumqeqesha kwaye ngale ndlela ufumane izakhono zokuphumelela imidlalo emininzi. Uyakonwabela ukonwaba kokudlala, ukuphumelela kunye nokuhambisa udliwanondlebe oluya kukuvumela ukuba wandise inqanaba lakho lobuqaqawuli.
Kweli phepha uyakufumana apho uchitha khona ixesha elimnandi nelonwabisayo udlala iSoka ekhawulezayo. Uza kudlala simahla.
Bhala phantsi kangangoko unako kwaye ulibethe iqela elichasayo. Ngaba elula ukudlala kwaye ilungele abantwana nabantu abancinci. Nangona kunjalo, ukuba umdala kwaye ufuna ukonwaba okwexeshana, ungathandabuzi ukungena ebaleni.
Qala ngokukhaba ibhola ngoku amanqaku amanqaku ukuze ufumane indebe.
Esi sithuba sinyani sesinye sezona zikhetho zibalaseleyo zokuba ngumlawuli weqela lakho lebhola ekhatywayo. Bhalisa kwaye udlale simahla, nangona kunjalo ukuba ufuna ukonwabela ezinye izibonelelo uya kuba nakho ukwenza intlawulo ukufikelela kuzo. Dlala ngawo nawuphi na umkhangeli zincwadi, kwaye wonwabele ukonwabela ibhola ekhatywayo.
Eli phepha liya kukwenza uzive ungumphathi wokwenyani, uya kuba nakho ukukhetha iqela olithandayo. Ukhetha kwakhona i- abadlali abadumileyo womhlaba
Yomeleza iqela lakho, uthathe isigqibo sokuhambelana kunye setha amaqhinga akho. Ngale nto intle, yabelana nabahlobo bakho, ubacele umngeni kwaye ujoyine iiligi zabo kwaye ubonakalise ukuba ungoyena ulungileyo!
Phila eyona midlalo ilungileyo yoMlawuli weSoka
Namhlanje amaqonga omdlalo wevidiyo alawulwa yi Umphathi webhola. Le midlalo yebhola ekhatywayo inomtsalane kakhulu njengoko eyona nto iphambili kulawulo lwangaphandle lweqela. Ukwenza ukuba iqondakale ngakumbi ulawula ulungelelwaniso, amaqhinga omdlalo, Ukukhetha kwabadlali, phakathi kwabanye abaninzi.
Le miba ibaluleke kakhulu kumphathi webhola. Beka kulusu lwe umqeqeshi nomphathi webhola ekhatywayo kwaye uze ukonwabele la mava amnandi kwimidlalo.
Umphathi webhola 2019
Ukuba uyinyani ibhola yomnyaziNgokuqinisekileyo uyawuthwala umoya womqeqeshi ngaphakathi. Qhubeka ke ukhuphele umphathi weBhola ekhatywayo amawaka amabini anethoba. Lo mdlalo omnandi uthathwa njengeyona nto iphambili kudidi loLawulo.
Akazi skimp kwiinkcukacha zolawulo kulandela imodeli ye-greats kwaye ikwenze uphile ngamava amakhulu.
Phila iimvakalelo zokwenza eyakho ulungelelwaniso kunye namaqhinga kwiqela lakho olithandayo. Ngaphandle koku, uya kuba nakho amava emidlalo ngobunyani obunje ukuba uya kuziva kwinqanaba lokubulela ngokuphuculwa kokulinganisa kwebhola.
Ukuze ube nayo kufuneka uhlawule, kuba ayihlawulelwa ngaphandle kweendleko. Nangona kunjalo xa uyikhuphele, uya kuba nakho ukonwabela Umphathi webhola ekhatywayo yasimahla kwiWindows, Mac nakwiLinux.
Kule mdlalo uya kuba nakho khuphisana kumaqela angaphezulu kwamashumi amahlanu amazwe, khetha ngaphezulu kwamawaka amabini eeklabhu. Uyakwazi ukukhetha kubadlali abangaphezu kwamakhulu amathandathu. Yenza umsebenzi ngamnye womphathi omkhulu ngokulawula iqela lakho, iiseshoni zoqeqesho, abadlali, ugqithiselo, iimali, abasebenzi.
Inguqulelo entsha ephuculweyo engamawaka amabini aneshumi elinesithoba kule saga ibandakanya iindaba ezinjengokuba uya kuba nakho Dala amandla phakathi kwabadlali. Dibanisa ndawonye ukwenziwa kweeyunifom, uvavanye abadlali ngokusondeleyo, ngokweenkcukacha ezithe kratya.
Ngaphandle koku ineziphuculo ezinkulu kwi amaqhinga, unolwazi olukuxelela ukuba isicwangciso sakho siyasebenza. Ubukrelekrele bokufakelwa obuchongiweyo kudluliso buye baphuculwa kwinqanaba elikhulu. Ngoku ugcwalise ngaphezulu iikowuti, iikhomishini kunye namagatya asondele kakhulu kwinyani.
Awungekhe uliphose ithuba loku phila ibhola ekhatywayo njengoko ufuna kulo mdlalo mkhulu.
Ibhola ekhatywayo yePC
Lo mdlalo omnandi usekwe kwi Iiklasi zekhompyuter zebhola ekhatywayo apho uchitha ixesha elininzi wonwabile. Nangona kunjalo, iphuculwe ngokudityaniswa kolawulo. Ndiyakuqinisekisa ukuba uyayithanda ngokusebenziseka kwayo kunye nokuphathwa ngokulula.
Gcina oku engqondweni, ngakumbi ukuba uziva ngathi uMlawuli weBhola ekhatywayo ucokisekile kakhulu ngeenkcukacha zolawulo. Iza ihlaziywe ngokupheleleyo kwaye isimahla I-PC-MAC, iThebhulethi, kunye nezinye izixhobo ezishukumayo.
Ngalo mdlalo ubalaseleyo wolawulo uya kuba nakho ukulawula eyakho uqeqesho, ukusayina, imali phakathi kwabanye abaninzi. Khetha abadlali abagqwesileyo kunye nabanye abasebenzi bakho, yakha iqela lakho ulise phezulu.
Uye imidlalo yemveli kunye nee-quirks eziphuculweyo. Abanye babo bangamaqela asithoba eeligi zamazwe aphesheya, abadlali abangaphezu kwamashumi amabini, ngaphezulu kwamawaka amaqela. Uyakwazi ukwandisa amabala emidlalo kunye nezinye iindawo, ezinje ngokuthengisa. Inenkqubo yamaqhinga aphambili kunye nezinye izinto ezintsha.
Sukuyeka ukuhlala ngamava wokuba ngumphathi webhola ekhatywayo kwaye ube nexesha elihle lokuyenza.
Umphathi webhola 2018
Lo mdlalo ukhawulelwe nguMphathi weSoka Ltd lukhetho olukhulu lokuqalisa i-adventure njengomphathi weqela. Kusimahla eqongeni Imicrosoft yeWindows yeWindows.
Ngayo ungalawula ngokwakho Iqela lebhola, Ukulawula ulawulo lwezoqoqosho nezemidlalo. Yiba ngumphathi wezemidlalo obalaseleyo kwaye uncede ukuphucula iqela lakho ukuze ulise phezulu.
Iimpawu ezintle zale simulator zichongiwe kukunxibelelana okungokwemvelo. Ngaba ifayile ye- iilayisensi ezisemthethweni yamaqela. Unamaqela angaphezu kwamakhulu asibhozo avela ngaphezulu kwamashumi amathathu anesihlanu amazwe kunye nokumisa okumnandi kwabadlali. Ukongeza koku, uya kuba nakho ukubala iiligi ezisemthethweni kunye neekomityi.
Umphathi webhola 2018 ikunika ithuba lokulawula yonke into enxulumene neqela lebhola ekhatywayo elikumgangatho ophezulu. Umsebenzi wakho iya kuba kukuziqhelanisa nezinto ezizezinye ukuze iqela lakho libe lelona lifanelekileyo. Ukusuka kuphuculo lwebala lemidlalo, ukudlulisa uqeqesho kubadlali bakho, izicwangciso phakathi kwabanye abaninzi.
Yenzelwe abo banomdla wokulawulwa kwezemidlalo, kuthatha ithuba lokulawula nganye nganye kwimicimbi yezolawulo neyemidlalo yeqela. Yiza ukonwabele oku ibhola ekhatywayo ukuba awuzukuzisola.
Sisicelo sasimahla se Android, kunye nesimbo somphathi webhola ekhatywayo enomtsalane. Ngaphandle kwento yokuba inentengiso eninzi, kufanelekile ukuba uzinike ithuba lokuyisebenzisa. Esi sicelo kukunika ithuba lokudlala nabahlobo bakho.
Unemincintiswano emithandathu yasimahla oza kuyidlala. Kwilaphu Umdlalo weChampion, I-Spanish League, i-UK Premier League, i-French League.
Kukho izibonelelo ezingaphezulu kokungalunganga onako xa ukhuphela usetyenziso. Thatha ithuba kwaye udlale nabahlobo bakho ngokwenza umdlalo webhola intle
Okokugqibela, njengoko uya kuba uxabisile, unokhetho olwahlukileyo lokwenza amava amnandi kwi imidlalo yebhola ekhatywayo. Umlingisi ngamnye webhola ekhatywayo ngumdlalo ngamnye. Yakha iikhrayitheriya zakho kunye nokunambitha ekusebenziseni.
Yabelana nabahlobo bakho kunye nosapho ngamava okudlala owuthandayo umdlalo. Thatha ithuba lokudala kunye nokwalathisa iqela lakho lebhola kwaye uveze izimvo zakho zezicwangciso zokulungelelanisa.
Chwayitisa, phila uyolo lwebhola ekhatywayo ngakumbi olu luhlu eyona midlalo yebhola ekhatywayo. Yeyiphi oyikhethileyo ukuqala?
Ezona zixhobo zilungileyo zi-7 ziguqula umbala weenwele ngexesha lokwenyani